Ğmamoğlu'ndan, मन्त्री şavuşoğlu'nun च्यानल इस्टानबुल टिप्पणी गर्न जवाफ | RayHaber
[10 / 12 / 2019] बोस्फोरस एक्सप्रेस उस्मानेलीबाट पहिलो यात्री यातायात शुरू भयो	41 कोजेली
घरटर्कीMarmara क्षेत्र34 इस्तांबुलĞmamoğlu'ndan, मन्त्री şavuşoğlu'nun च्यानल इस्तानबुल टिप्पणीलाई जवाफ दिनुहोस्
Ğmamoğlu'ndan, मन्त्री şavuşoğlu'nun च्यानल इस्तानबुल टिप्पणीलाई जवाफ दिनुहोस्
02 / 12 / 2019 34 इस्तांबुल, साधारण, च्यानल इस्तांबुल, राजमार्ग, HEADLINE, Marmara क्षेत्र, टर्की
Cavusoglun च्यानल istanul कमेन्टमा जवाफ दिनुहोस्
"भूकम्प कार्यशाला" मा आफ्नो भाषण पछि, बीबी राष्ट्रपति एकरेम ğमामुलुले पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिए। इमामोग्लू, विदेश मन्त्री मेवलुट काभुसोग्लु "इस्तानबुल चैनल इस्टानबुलले" उत्खनन हिट गर्ने समुद्री उडान हुनेछ, "को उल्लेख गर्दै उनले जवाफ दिए।
इमामोग्लूले जोड दिए कि इस्तांबुलका जनताले नहरमा इरानबुलमा शून्य बिन्दु सम्बन्धी जानकारी कनाल रहेको बताएका थिए र उनले भने, "हामीले रेखांकित गर्यौं कि त्यहाँ एउटा प्रक्रिया छ जसले विश्व, पर्यावरणीय प्रणाली, मौसम र भूकम्पलाई सबै पक्षमा असर पार्छ, र जनसंख्या र संरचना भाँडामा असर पार्छ। मलाई परवाह छैन जहाँ विदेश मन्त्री, विदेश मामिला वा अन्य मामिलाहरु छन्। म इस्तानबुललाई देख्छु, 16 मिलियन मानिस, यो देशको लागि के खर्च हुनेछ। ”
इस्तानबुल महानगरपालिका (आईएमएम) का अध्यक्ष एकरेम इमामोग्लु, "भूकम्प कार्यशाला" भाषण क्यामेराको अगाडि पारित भएपछि। पत्रकारहरूले इमामोग्लुलाई सोधेका प्रश्नहरू र आईएमएम राष्ट्रपतिले दिएका उत्तरहरू निम्न थिए:
प्रोटोकोलमा नामहरू छन् जुन आँखाले खोजे; इस्तानबुलका गभर्नर अफैडका राष्ट्रपति हुन लागेका छन्। यहाँ सबैलाई आमन्त्रित गरिएको छ, मेरो ज्ञानको साथ। सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गभर्नर। हुनसक्छ कोही बोर्ड वा प्रतिनिधिमंडल प्रतिनिधित्व गर्न आए; तर मलाई थाहा छैन को को थियो, स्पष्टसँग आएको थिएन। मलाई आशा छ कि उनीहरू यहाँ छन्। आज, विषय, वरिष्ठ वैज्ञानिकहरू, प्राविधिक व्यक्तिहरू, उनीहरू के थप्नेछन्। हामी मानिसहरु हो जसले प्रबन्धकहरु सुन्नु पर्छ र उत्तरदायित्व लिनु पर्छ। यदि उनीहरू आउँदैनन् पनि हामी उनीहरूलाई रिपोर्ट पठाउछौं।
“मलाई इस्टानबुल हेर्छ”
तपाईंले च्यानल इस्तानबुलको पनि उल्लेख गर्नुभयो। राजनीति पनि एजेन्डामा छ। परराष्ट्रमन्त्री मेवलुट काभुसोग्लू, "हामीले उत्खनन गर्दा हिर्काउने समुद्री उडान हुनेछ," उनले भनेका थिए। तपाईंको अडान जारी छ। कनाल इस्तानबुल परियोजना कहाँ जाँदैछ? किनभने, सत्ता पक्षले यो मुद्दामा दृढ र आग्रही रहेको छ।
हाम्रो अनुसन्धानमा, हामी देख्छौं कि इस्तानबुलका मानिसहरूसँग लगभग शून्य जानकारी छ। च्यानल इस्तानबुल, 'पागल प्रोजेक्ट', 'एक च्यानल जाँदै छ' तिनीहरूलाई थाँहा छ। अर्को शब्दहरुमा, तिनीहरु लाई प्रभाव बारे प्रभाव छैन, यसले उत्पादन गर्ने क्षति, यसको लागत र यसको बेफाइदा को बारे मा जानकारी छैन। हामी जोड दिन्छौं कि विश्व, ईकोसिस्टम, मौसम, भूकम्प र प्रत्येक पक्षमा भूकम्पलाई असर गर्ने र जनसंख्या र निर्माणलाई बढी असर गर्ने विषयलाई जोड दिनेछौं, र हामी रेखांकित गर्दछौं कि यो त्यस्तो प्रक्रिया होइन जुन T भनेर भनिन्छ कि हामी निविदामा गयौं। मलाई परवाह छैन जहाँ विदेश मन्त्री, विदेश मामिला वा अन्य मामिलाहरु छन्। म इस्तानबुललाई देख्छु, 16 मिलियन मानिस, यो देशको लागि के खर्च हुनेछ। त्यसोभए यो हुन सक्छ 75 अरब, सायद 125 अरब पाउन्ड वर्णन गरिएको छ। यस्तो लागत, आज टर्की गरेको प्राथमिकता को आर्थिक बराबर के छ? यस शहरले यसको पुरातन भूगोल र ऐतिहासिक विगतमा कस्तो प्रभाव पार्छ? कृषि वा वन क्षेत्रहरूमा कस्तो असर पर्दछ? मानव जीवन, यातायात र भौगोलिक अखण्डता मा के प्रभाव छ? म यसको ख्याल राख्छु। त्यो मलाई रुचि हो। म घोषणा, साझेदारी र कुरा गर्न जारी राख्नेछु।
EL MELEN कि क्रिटिकल छ ... "
बाँधमा पछिल्लो अवस्था के हो? इस्तानबुलमा पानीको अभाव हुनेछ? हाल, हाम्रो बाँधहरू अधिग्रहणको केवल 36 प्रतिशत भन्दा बढि छन्। पछिल्लो 3-4 दिनदेखि अधिव्याप्त दर, जुन केही हप्तादेखि तलको प्रवृत्तिमा रहेको छ, वृद्धि हुन थालेको छ। हाम्रो जाडो प्रयास ढिला भयो; तर हामीले अहिलेसम्म जाडोको अनुभव गरेका छैनौं। इस्तानबुलको डरलाग्दो पानी परिदृश्य,2खडेरी वर्षहरूसँग सम्बन्धित छ। हामी हेर्नेछौं कि यस खडेरीले गर्मी ब्यारेक्सलाई कसरी असर गर्छ। यो जाडो को भविष्यवाणी गर्न गाह्रो छ। यदि अर्को वर्ष खडेरी छ भने, पानीको अभावले हामीलाई 2021 मा पर्खदै छ, हाम्रा साथीहरूको दूरदृष्टि। अवश्य त्यहाँ2केहि छ जो यहाँ हडताल छ। ती मध्ये एक किन यो हो कि ऐतिहासिक परियोजना जुन मेलेन बाँध2वर्ष पहिले खोलिनेछ र इस्तांबुलले करोडौं घन मिटर पानी भण्डारको आपूर्ति गर्न सकिएन अझै पनी निष्कर्ष सकिएको छैन ... हामीले प्राप्त गरेको पछिल्लो जानकारीका कारण गलत उत्पादनको उन्मूलनको बारेमा थप परियोजनाको लागतसम्बन्धी प्रासंगिक विनियोजन जारी गरिएको छैन। ... 2040 समाजलाई ग्यारेन्टी दिइएको छ कि हामीले एउटा शहर कब्जामा लियौं जहाँ हामीलाई राष्ट्रपतिले 2071 सम्म पानीको समस्या हुने छैन। हामी त्यो ग्यारेन्टी लिएर चुनिएका थियौं। त्यसकारण यो प्रक्रिया राष्ट्रिय मुद्दा हो। यदि डीएसआई एक विनियोजन समस्याबाट ग्रस्त छ, हामी संस्थालाई चेतावनी दिन्छौं जसले यो विनियोजन स्थापना गर्दछ र तिनीहरूलाई संवेदनशीलतामा आमन्त्रित गर्दछ। यो एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। कम्तिमा मलाई लाग्छ कि राष्ट्रपतिले "2040'a, 2071'e ले पानीको समस्या अनुभव गर्दैनन् र वचन दिन्छन्। हामीले सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिसकेका छौं uz हामी सबै संस्था र संगठनहरूलाई आमन्त्रित गर्दछौं प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी लिन। अहिले2को मतलब यो होइन कि भविष्यमा पानीको समस्या हुनेछैन, किनकि हामीले आशा गरेका छौं कि त्यहाँ वर्षमा पानीको समस्या हुनेछैन। महत्वपूर्ण मेलेन बाँधको अतिरिक्त, जलस्रोत संरक्षण र विकासका लागि हाम्रा परियोजनाहरू निरन्तर चलिरहेका छन्। हामी जनवरी मा एक पानी कार्यशाला हुनेछ। जहाँ हामी यसलाई ह्यान्डल गर्नेछौं। तर सबै भन्दा पहिले, हामी बताउँछौं कि; कनाल इस्तानबुल परियोजनाले 30 वरपर पानीको कुण्डहरू नष्ट गर्ने तथ्य इस्तानबुलको लागि कत्तिको अनावश्यक र जोखिमपूर्ण छ भन्ने अर्को प्रमाण हो। यसलाई पनि रेखांकित गरौं।
मँ वैज्ञानिक क्षेत्रहरूको लागि जिम्मेवार हुनेछैन "
भूकम्पको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका केही व्यक्तिलाई आईएमएम व्यवस्थापनले कार्यशालामा किन समावेश नगरेको भन्ने बारे सोशल मिडियाले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ। के तपाई यी आमन्त्रणहरूका बारे सचेत हुनुहुन्छ र तपाईंको सन्देश हुनेछ?
मेयरको रूपमा कसलाई आमन्त्रित गरिएको थियो, जो थिएनन… म न वैज्ञानिक पक्षमा न घुसपैठो हुँ न अधिकार नै। यसलाई एक पटक मात्र भनौं। त्यहाँ कोही पनि आमन्त्रित गरिएको छैन। यो स्पिकर हुनुको बारेमा हो। प्रतिक्रिया देखाइएको छ ... वैज्ञानिक जसको नाम उल्लेख गरिएको छ हाम्रो नगरपालिकासँग अन्य क्षेत्रमा पनि सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ। उदाहरण को लागी, मलाई थाहा छ कि İSKİ ले उनीहरुलाई एक अध्ययनको प्रस्ताव गरेको छ। तसर्थ, इस्तानबुलमा कुनै पनि वैज्ञानिक बाहिर बस्नुहुन्न। अपूर्ण हुन सक्छ। हामीसँग धेरै वैज्ञानिकहरू छन्। सबैजना स्पिकर हुन सक्दैनन्। तर सबैजना प्रक्रियामा संलग्न हुनुपर्छ। यो सुनिश्चित गर्न हामी बोर्डहरू स्थापना गर्दैछौं। यदि उनीहरूसँग गल्ती भयो भने हाम्रो मित्रलाई 'हामी माफी चाहन्छौं' भने। तर उसले नआउन भनेर छनौट गर्नु हुँदैन किनभने म विज्ञानको लागि वक्ता होइन। म आशा गर्छु कि आज वा भोलि आफैं उच्च स्तरको सहभागी बन्नेछ र यस प्रक्रियामा योगदान पुर्‍याउने जानकारीहरूसँग साझेदारी गर्दै। तिनीहरूलाई मात्र होईन, हामी यस अर्थमा सबैलाई आमन्त्रित गर्दछौं। कमीहरू हटाइन्छन्। यो न त पहिलो हो न अन्तिम हो। हामी जहिले पनि क्षेत्रहरू र प्रक्रियाहरू समावेश गर्दछौं जुन हामी इस्तानबुलको प्रत्येक क्षणमा त्यस्तो भूकम्पको बारेमा कुरा गर्ने छौं। किनभने हाम्रो पहिलो मुद्दा भूकम्प हो।
İmamoğlu’ndan Bakan Turhan‘a Kanal İstanbul Yanıtı:…
एक्रेम İmamoğlu'nu भावनात्मक मिनी बस!
मन्त्री अर्सलन रेलवे बारे प्रश्न ...
"आडाना मेट्रोलाई मन्त्रालयमा बदल्दै"
मन्त्री "सिग्नलिंग एक साइन Qua गैर हो" ...
CHP बाट Gürer Niğde अंकारा मोटरवे परियोजना को बारे मा सोध्नुभयो ...
टोरमवे आलोचनावादका लागि मेयर कोकोओलुluको प्रतिक्रिया
एकेपीको इü्गालले भने 'हामी ट्राम लिफ्ट गर्नेछौं' सज्लर
3 यातायात मंत्रालय बाट। एयरपोर्टमा भ्रष्टाचार ...
कोकाली भर बाट स्टेडियममा गैर स्टप पहुँच
मंत्री Arslan, क्यानल इस्तांबुल को बाटो मा काम पूरा भयो
मन्त्री अर्सलान, इस्तानबुल
मंत्री अर्सलनको 3। एयरपोर्ट, FSM ब्रिज र नहर…
मन्त्री अर्सलन: "यस वर्ष च्यानल इस्तानबुल खन्ने"
प्रधानमन्त्री टोरानले घोषणा गरे "च्यानल इस्तांबुल स्थगित हुने छैन"
इस्तानबुल भूकम्प कार्यशाला
Ekrem को पूर्ण प्रोफाईल हेर्नुहोस्
कान्ला इस्तांबुल परियोजना
इज्मिर फोल्डि B साइकल अनुप्रयोग
इस्तानबुल तपाईंको समुद्री कार्यशाला 11 डिसेम्बर मा आयोजित हुनेछ